नेपाल समूह आक्रोशित , आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बानेश्वरमा !! | सुदुरपश्चिम खबर
नेपाल समूह आक्रोशित , आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बानेश्वरमा !!
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयप्रति एमाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ओलीको निर्णयविरुद्ध प्रतिक्रिया दिन नेता नेपालले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।
भर्खरै नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक सुरु भएको हो । अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनको कार्यसमिति पुनर्गठन गरेपछि नेपाल समूह आक्रोशित बनेको हो ।
ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पद हटाउने र प्रदेशको नेतृत्व हेरफेर गर्ने निर्णय गरेका हुन् । एमालेका नेतालाई प्रदेशको नेतृत्वबाट हटाएर ओलीले माओवादी केन्द्रका नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि यो समूहले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो ।
माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले ओलीले एमाले फुटाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । (annapurnapost बाट सभार)